IGugulethu, iqhayiya lethu, iminyaka engama-60 ukuya phambili… : The Cape Town Museum
“Xa kusithi qatha iGugulethu ezingqondweni zabantu, kuthi qatha ukubulawa kwesiXhenxe saseGugulethu nguRhulumente woCalu-calulo ngeminyaka yoo-80 okanye kuthi qatha ukubulawa kuka-Amy Biehl. Imbali yaseGugulethu ityebe ngaphezu kwezi ntlekele zimbini,” utsho njalo uGeoff Mamputa, umHlali waseGugulethu kwaneTsha-ntliziyo lasekuHlaleni.
IGugulethu yilokishi ekwi-Cape Flats malunga neekhilomitha ezili-18 kumzantsi mpuma weKapa eNtshona Koloni. Igama elithi Gugulethu lithetha “iqhayiya lethu” ngesiXhosa.
Amatyotyombe okuqala awokhiwayo aba kwiNtshona yeNyanga, awathi kamva aziwa ngokuba yiGugulethu, okhiwa ngenxa yokohluthwa nokufuduswa ngesinyanzelo kwabantu abantsundu baseMzantsi Afrika. Iintsapho ezimbini zokuqala ezazisuka eWindermere zafuduselwa kwinkampu entsha ngomhla we-19 kuDisemba 1958 kwaza emva koko kwalandela ezininzi. Uluntu olwaluhlelwe kakuhle lwaseKensington, e-Athlone, eRetreat naseSimons Town lwasuswa lwaza lwathunyelwa eGugulethu.
IGugulethu ilubonakalisa kakuhle uhambo lwezopolitiko eMzantsi Afrika. Ngo-1976 ulutsha olwaluphenjelelwa zezopolitiko lwema ngokuchasene nemfundo yabantu abantsundu (Bantu Education) engenabulungisa lwaza lwahlangana nengqumbo yomkhosi wamapolisa amanashinali, lufakwa izintywizisi, abafundi bedutyulwa kwaye bebulawa.
Umzabalazo wenkululeko wafikelela kuvutho-ndaba phakathi kweminyaka yoo-80. Amehlo ehlabathi athiwa ntshoo eGugulethu xa kwadutyulwa kwaza kwabulawa abafana abaselula abasixhenxe ababephakathi kweminyaka eli-16 nengama-23 ngamapolisa aseMzantsi Afrika. Nangona bachazwa njengabanqolobi nguRhulumente woCalu-calulo baphakanyiswa njengamaqhawe omzabalazo luluntu.
Nangona ikhe yaneziseko ezigungqayo, uluntu oluluqilima oluphume apha ludale ubomi obutsha eGugulethu. Ezemidlalo, iiprojekthi zoluntu, ezobugcisa nenkcubeko ziyaqhubeka zisanda, nangona imeko yezopolitiko ingentlanga. Kuthe ngenxa yenkqubela kwavela abantu.
Kwiminyaka engama-60 emveni kokusekwa kwayo iGugulethu nayo iphos’ ilitye esivivane ngembali yayo eluqilima neliqhayiya.
Igugu lethu – GUGULETHU IQHAYIYA LETHU